काठमाडौं, ५ साउन । स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलनमा रहेका पाँच जना पत्रकारलाई प्रहरीले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वतन्त्रतापूर्वक संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गरिरहेका पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको यो ज्यादती प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो
काठमाडौं, ५ साउन । डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नयाँ बानेश्वरमा भएको कार्यक्रममा कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलका कार्यकर्ताको प्रवेशसँगै तनाव भएको छ । कुनै पनि दल वा संगठनको झण्डा नलिई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन आयोजकले आग्रह गरे पनि तरुण दल उक्त कार्यक्रममा आफ्नो झण्डासहित उपस्थित भएको थियो । माइतीघरबाट नयाँ
काठमाडौं, ५ साउन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गोविन्द केसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनकारीविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिन भने पनि नेकपाका एक नेताले विद्रोह गरेका छन् । उनी डा. गोविन्द केसीको पक्षमा भएको आन्दोलनमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई नै सत्तोसराप गरेका थिए ।
काठमाडौं, ५ साउन । डा. गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दालाई लिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको एउटा समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ । नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघले वानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि भिडन्त भएको हो । भिडन्तपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ८ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । नेविसंघका
काठमाडौं, ५ साउन । डा. गोविन्द केसीका मागहरुको मुद्दालाई लिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको एउटा समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि भिडन्त भएको हो । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ८ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । नेपाल
कैलाली, ३ साउन । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका– ७, महुलियामा चक्कु प्रहारबाट एक व्यक्तिको हत्या भएको छ । स्थानीय २६ वर्षीय रमेश विकले सामान्य विवादमा २७ वर्षीय मानबहादुर सोमैको चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेका हुन् । रमेशको चक्कु प्रहारबाट सोमैी गम्भीर घाइते भएका थिए । सोमैलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो
काठमाडौं, ३ साउन । तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समितिको पहिलो बैठक असार २ मा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्यो । त्यसपछि असार २६ मा नेकपा सचिवालय बैठक पनि त्यहीं बस्यो । फेरि नियमावली परिमार्जन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बैठक डाकिएको
तुलसीपुर । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रमाणिकरण गर्नकालागि दाङका दुई वटा सामुदायीक बनमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ । नेपाल र भारतका बन विज्ञहरुको टोलीले मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रका दुई वटा सामुदायीक बनहरुमा स्थलगत अध्ययन गरेको हो । बन प्रमाणिकरण विज्ञ एके बर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले वडा नं. ७ को श्री गणेश सामुदायीक
तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सामुदायीक बनहरुलाई लक्षित गरेर मंगलबार देखि चिउरीका बिरुवा बितरण सुरु गरिएको छ । उपमहानगरले सुरु गरेको सुन्दर र हरियाली तुलसीपुर अभियान अन्र्तगत चिउरीका बिरुवा बितरण सुरु गरिएको हो । नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ तुलसीपुर नगर समितिका उपाध्यक्ष खेमलाल महतरालाई बिरुवा हस्तान्तरण गरेका हुन्
३२ असार । काठमाण्डौंबाट उत्पादन भएको हर्वल साबुनको सोमबार दाङको तुलसीपुरमा लन्च गरिएको छ । निशान्त ट्रेड लिङ्कले उत्पादन गरेको एरोन हर्वल साबुनको रिपोर्टर्स क्लव तुलसीपुरमा एक कार्यक्रमका बीच लन्च गरिएको हो । युवाहरुको लगानीमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गरेको सो सावुनलाई दाङमा रहेको हेल्प नेपालले बजारिकरण गरेको छ । साबुनको तुलसीपुर
तुलसीपुर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा सोमबार विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष नवराज लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न संघ, संस्था तथा क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु सदस्य रहेका छन् । समितिमा शुसिला न्यौपाने, शान्ता पाण्डे, गोकुल चौधरी, लाकराज डाँगी, हरिकला मियाँ वली, कमल लामिछाने, मिना वादी लगायत विभिन्न संघसंस्था
सल्यान, ३१ असार । सबैतिर असारे विकासको मूल फुटेको समयमा सल्यानको शारदा नगरपालिका भने किरा पो खोज्दैछ । नगरपालिका किरा खोज्दै गाउँगाउँमा पुगेको छ । किरा खोज्ने मात्र होइन नगरपालिकाले १२ क्वीन्टल किरा समातिसकेको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिका– ६ बरलामा एउटै गाउँमा १२ क्वीन्टल ४ किलो शंखेकिरा संकलन समातिएको
काठमाडौं, ३० असार । कतार नेपाली एकता समाजको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य तयारी भएको छ । “राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनतन्त्र र जनजीविकाको लागि हाम्रो अभियान, प्रवासी नेपाली श्रमजीवीको हकहित र अधिकारको पक्षमा पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन” भन्ने मूल नाराका साथ यो सम्मेलन हुन थालेको अध्यक्ष लुमाकान्त पुनमगरले जानकारी दिए । अध्यक्ष
काठमाडौं, ३० असार । संघीयता कायान्वयनको नाममा जनताको ढाडै सेक्ने गरी राजश्व बृद्धि गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्यमान अर्थव्यवस्था र संघीयता विषयक अन्तक्र्रिया नै गर्ने जनाएका हुन् । जिल्ला समितिको सचिवालयको बैठकपश्चात अध्यक्ष आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको
काठमाडौ, ३० असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत चयन भएका छन् । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको राजपा संसदीय दलको बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मतरुपमा चयन गरेको सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । आजको बैठकमा समसामयिक विषय र
भरतपुरमा २ अर्बको रिङरोड र लिङक रोड बन्दै, अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा शिलान्यास, २ वर्षमा काम सकिने
चितवन, ३० असार । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रिङरोड र विभिन्न लिङ्क रोडहरूको शुक्रबार शिलान्यास गरेका छन् । रोडको एक कार्यक्रमका बीच चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रिबन काटेर शिलान्यास गरेका हुन्
काठमाडौँ, ३० असार । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा होमिने बेला आफ्नो घोषणापत्रमा निःशुल्क वाईफाईको कुरा पनि निकै महत्व दिएर उठाएको थियो । उनै दुई दल मिलेर बनेको नेकपाको दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले भने वाइफाईलाई फाइफुई बनाएको छ । सञ्चार सेवा
काठमाडौं, २९ असार । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गराई आफूहरुलाई अन्याय गरिएको र न्याय दिन माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष बिन्तीपत्र चढाएका छन् । असार २९ र ३० गते सञ्चालन हुन लागेको परीक्षा स्थगित गराई आपूmहरुलाई अन्यायमा पारेको भन्दै न्याय दिन अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजासँग गुहार मागेका हुन्
राजपा अझै संसदीय दलको नेताविहीन
काठमाडौं, ३० असार । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संसदीय दलको नेता अझै बनाउन सकेको छैन । शुक्रबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले ३ दिनसम्म सहमतिका लागि भन्दै म्याद थप गरेको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सहमतिका लागि ३ दिन
काठमाडौं, ३० असार । छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनशनरत गंगामायाको अनशन शुक्रबारबाट तोडिएको छ । उनी वीर अस्पतालमा अनशन बसेकी थिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन् । त्यसअघि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा हस्ताक्षरित २ बुँदे पत्र पनि गंगामायालाई दिइएको थियो । पत्रमा २०७२